China Ethyl Ethanol fekitori uye vagadziri | Zhongrong
Ethanol, inozivikanwa nemolecular formula C2H5OH kana EtOH, haina ruvara, yakajeka, inopisa uye isinganetsi mvura.Ethanol ine chikamu chakakura chinodarika 99.5% inonzi anhydrous ethanol. Ethanol imhando yedoro, ndicho chinhu chikuru chewaini, inowanzo zivikanwa sedoro, chinhu chinopisa, chisina kugadzikana uye chisina kujeka mvura pane tembiricha yekudenga, kumanikidza kwemhepo, mhinduro yayo yemvura ine yakakosha, inonhuwirira uye inoshatirisa zvishoma. Ethanol haina kuzara kupfuura mvura uye inogona kusanganiswa pamwe chete chero zvodii. Inonyungudika mumvura, methanol, ether uye chloroform.Iyo inogona kuputsa akawanda makemikari makomputa uye mamwe asina kujairika macomputer.
Zita: anhydrous ethanol, anhydrous doro
Molecular fomula: CH3CH2OH ， C2H5OH
CAS kwete. : 64-17-5
Molecular uremu: 46.06840
Kuwandisa: 0.789 g / mL (20 ℃)
Chigadzirwa chigadzirwa: GB / T678-2002 giredhi repamusoro
Zvepanyama uye zvemakemikari zvivakwa
Chekutanga pane zvese, ethanol yakakosha solvent, inoshandiswa zvakanyanya mukurapa, kupenda, zvigadzirwa zvehutsanana, zvizoro, mafuta nemamwe masango.
Kechipiri, ethanol chinhu chakakosha chemakemikari mbishi zvinhu, izvo zvinoshandiswa mukugadzira acetaldehyde, ethylamine, ethyl acetate, acetic acid, nezvimwewo, uye inowana akawanda epakati emishonga, dhayi, pendi, pefiyumu, synthetic rubber, sipo, mushonga wemushonga nezvimwe. Chechitatu, 75% ethanol aqueous solution ine yakasimba bactericidal kugona uye inowanzo shandiswa inouraya utachiona mukurapa. Muna 2017, makurukota akasiyana siyana nemakomisheni muChina zvakabatana zvakaburitsa marongero akakodzera kusimudzira kushandiswa kwepasirese peturu ethanol-kupera nyika ino pakupera kwa2020.
Ronga kugadzirwa uchinyatso kuenderana neyakajairwa bhizinesi "Anhydrous ethanol (Q / RJDRJ 03-2012)".
Pashure: 150 zvidimbu Doro / Hyamine Pukuta
Zvadaro: Ethyl Acetate （≥99.7%）